Izigaba zokuthuthukiswa kwengane esibelethweni
Isiqephu esibalulekile esithinta impilo yesikhathi esizayo somuntu kusukela ekukhulelwe kuze kube sekufeni ukuzalwa kwakhe. Ukuxhuma kwezizukulwane kubonakala ngokuqondile kulo mzuzu. Isikhathi se-intrauterine nezinsuku zokuqala zomuntu kuthinta konke okunye okuphilayo, naphezu kokuthi asikwazi ukusebenzisa noma yimuphi ithonya. I-determinant kakhulu kunezinyanga ezingu-18 zokuphila - kusukela ngesikhathi sokuvela ezinyangeni ezingu-9 zokuhlala ezizimele.
Izigaba zokuthuthukiswa kwengane esibelethweni kusukela ekukhulelwe kuze kube sekuzalweni
Zombili izilwane nendoda zinendlela efanayo yokukhiqiza. Abesifazane, njengabesifazane, bakhiqiza amaqanda, amadoda, njengamadoda endalo, yi-spermatozoa. I-fetus iyenzeka lapho i-ovum ihlwanyelwa ngesilwane sesidoda. Ngaphezu kwalokho, ukuthi zonke izinhlobo zezilwane ziphinde zakhiwe ngokuqhubeka kwe-genus, imvelo yenza inqubo yokukhulelwa ibe inqubo enhle.
Izitho zokubeletha kwabesifazane zisezingeni lesikhumba, engxenyeni engezansi kwesisu. Isibeletho sowesifazane, igama elivamile nelivamile - isibeletho, isitho somzimba, cishe amasentimitha angu-40 ngamasentimitha, esilinganisa amagremu angamashumi amahlanu, esesemkhatsini wezitho zangasese. Isibeletho sifana nesimo esenziwe nge-pear futhi sixhuma ngokuqala kwesifazane ngesigaba sayo esincane. Ingxenye engezansi yesibeletho iphela ngokuvula kwangaphakathi komsele womlomo wesibeletho.
Ingxenye engenhla yesibeletho iqhutshwa yizigaxa ezimbili eziqondiswe ngezindlela ezihlukene ngobude mayelana no-7-10 amasentimitha. I-tube ngayinye ekugcineni ekugcineni kusukela esibelethweni iphela ngesigxobo ngesimo sensimbi, esezansi lapho i-ovari ikhona khona. Ngaphansi kwesinye sama-ovari amabili ama-oviductive tishu.
Nsuku zonke ama-ripens amaqanda emgodini futhi cishe izinsuku ezingu-10 emva kokuya esikhathini esiya esibelethweni eduze kwe-tube kusuka ovary. Ngesikhathi esifanayo, i-lining elula ikhiwa esibelethweni ukuze iqanda likhule. Uma inqubo yokukhulelwa kweqanda ayitholakali, idlula esibelethweni bese iphuma ngaphandle. Ngemva kwamasonto amabili, umzila okhethekile olungiselelwe uphinde uphonswe ngaphandle, futhi iqanda elisha lenzelwe ukukhulelwa kweqanda elilandelayo. Le nqubo yokushiya impahla engasetshenzisiwe esasijwayele ukubiza ukuya esikhathini.
Ezingxenyeni zesilisa zokuzala ziyizicathulo, ezingaphambi kokuzalwa komfana ezingeni le-vertebrae yakhe, kodwa ngesikhathi sokuzalwa uthatha indawo yawo ku-scrotum. Ematendeni, i-sperm ikhiwa. Ososayensi babala ukuthi indoda enempilo ingaphonsa izigidi ezingaphezu kwezigidi ezingu-200 ze-spermatozoa nge-ejaculation, futhi izintambo ezikhiqiza izidakamizwa zesinye sezici zingenza cishe amamitha angu-1 noma ubude bamamitha angu-1609.
Ngesikhathi sokulala ngokobulili, isidoda sowesilisa siphumela emkhathini wesifazane ngokusebenzisa i-urethra. Ukuthuthukiswa kwe-spermatozoon evuthiwe ekuvuleni komlomo wesibeletho kunikeza umsila wakhe omude, owenza umlenze, uguqula umzimba wesilisa bese ukhula ngesivinini esingama 3 mm ngomzuzu. I-spermatozoa esheshayo ithunyelwa emgodleni wesibeletho endaweni yesibindi, egijimela emipayipi ngomgomo oyinhloko - ukutshala iqanda. Ngokushesha nje lapho i-spermatozoon esheshayo ifinyelela eqandeni, ifaka, ngenkathi ishintsha isimo sayo ngokushesha futhi ingatholakali ne-spermatozoa esele
Iqanda elikhulelwe liya emgodini we-uterine ngokusebenzisa ithubhu, lihlelwe odongeni bese liqala ukuthuthukiswa kwalo. Izinguquko ezikhethekile zamalitha, ukuguqula zibe i-placenta, ukwakha "isidleke" somntanakho, futhi kuyindlela eqondile yokudla ingane. I-placenta iqala ukukhula ngokushesha, ukwandisa futhi ibe yindawo ehlabayo, izintambo zezinzwa, imithwalo yegazi yenziwa - ukuthuthukiswa kwengane kwaqala.
Ngemuva kwesikhashana emva kokukhulelwa kwamaseli amaqanda ahlukene aqala ukwakha, okuzobe sekumelela izingxenye zomzimba wengane nezitho zawo. Kakade ngaleso sikhathi ubulili bezingane ezizayo bebekwe.
Ukuba sisesibelethweni, ingane ihlala ebholeni yamanzi, evikela ingane yakho ekulimaleni kwengozi (uma umama, isibonelo, ebetha okuthile). Ngaphezu kwalokho, amanzi anikezela ukushisa okuhlala njalo nesikhala samahhala, okwanele ukuhamba komntwana, kuze kufike ngesikhathi sokuzalwa.
Ukuthuthukiswa kwe-fetus kwenzeka ngokushesha kakhulu. Ngemva kwenyanga, ikhula ibe ngu-4 mm futhi isesigodini esincane esigcwele uketshezi lwamanzi, ngobukhulu beqanda lejuba. Futhi ngemva kwenyanga, le-fetus ikhula ibe yi-30 mm futhi sekuvele kungenzeka ukuthi ihlukanise izingxenye zayo zomzimba - ikhanda, izingalo, imilenze. Ngalesi sikhathi umntwana ozayo unesimiso sakhe sezinzwa kanye nesistimu yokujikeleza.
Ukondla kwe-Fetal esibelethweni kuqhutshwa ngentambo yomzimba, ehlangene ne-placenta. I-placenta, etholakala ngaphakathi kwesibeletho, njengesihlungi, ihlukanisa izinto ezidingekayo ezivela egazini elingenayo lomama ezinganeni nasemabhuloki, ligcina izinto eziyingozi. Nature Amazing! Futhi ngesikhathi sokuzalwa komntwana, intambo yomzimba ingafinyelela ku-30 ​​cm kuya ku-100 cm.
Ubude bezithelo ekupheleni kwenyanga yesithathu kufinyelela ku-9 cm, kanti isisindo singama-amagremu angu-30, emva kwamanye amaviki amane ubude buyi-18 cm, nesisindo somntwana singama-gramu angu-120. Ngalesi sikhathi, umsebenzi ojulile wenhliziyo uyaqaphela futhi kungenzeka ukuthi unqume ubulili bendodana ezayo. Ukunyakaza kwe-fetus kubonakala kakhudlwana. Ngokuvamile, lezi zintuthuko ezithengiswayo zibonakala zibonakala ngemva kwamasonto angu-18 kuya kwangu-19 emva kokukhulelwa.
Ngenyanga yesihlanu yentuthuko ye-fetus, ubude bayo bufinyelela ku-25 cm, futhi isisindo sayo singaba amagremu angu-700. Kunezimo ezichazwe emithi lapho izingane ezizalwa kule nkathi ziphila. Emasontweni angama-28 emva kokukhulelwa, ekupheleni kwenyanga yesi-7 umntwana ubhekwa njengumuntu ophelele. Sekucatshangwa ukuthi akuvamile futhi akumangalisi, lapho izingane zizalwa ngalesi sikhathi futhi zisinda, naphezu kobuningi obungathuthuki.
Ngenyanga yesishiyagalolunye ubude bomntwana buyi-44 cm futhi bufanelekile kakhulu ekuthuthukiseni, nakuba kunakekelwa okukhethekile kubantwana abasha. Ngemuva kwamasonto angu-36, ngenyanga yesishiyagalolunye ingane isisindo esingama-2.27-2.50 kg, izitho zakhe ziyasebenza futhi zithuthukisiwe kahle, kodwa noma kunjalo, udinga ukunakwa, ngoba kubhekwa ukuthi isikhathi esigcwele somntwana ophelele Izinyanga ezingu-10.
Isisindo esivamile somntwana esikhathini sokuthuthukiswa kwamasonto angu-40 se-fetus kufanele kube ngu-3.2 -3.4 kg, nokuphakama kwalo - cishe ngamasentimitha angu-48. Ngalesi sikhathi, ukuzalwa kwemvelo kwenzeka.
Sinikeze incazelo emfushane yezigaba zokuthuthukiswa kwemvelo kwengane esibelethweni, ngaphandle kokucabangela izinto zangaphandle, izimpembelelo zemvelo, izici zofuzo, ukudla, isimo sengqondo sabazali, kokubili ngesikhathi sokukhulelwa futhi ngesikhathi sokubeletha. Zonke lezi zici zithinta kakhulu ukuthuthukiswa kwe-fetus. Akunakwenzeka ukulandela konke, kepha abazali ababandakanyeka ekuthuthukiseni ingane yabo kumele benze zonke izimo ezifanele. Lokhu kufaka phakathi: ukunakekelwa kwempilo yomuntu hhayi kuphela ngesikhathi sokubeletha, kodwa nangaphambi kokukhulelwa kwengane, futhi nokunakekela impilo efana nengqondo yomama. Ukuzalwa kwangaphambi kokuqala kungenzeki ngenxa yezizathu zomzimba kuphela, kodwa futhi ngenxa yenkathazo nodlame. Ngakho-ke, akusizo ngalutho ukuthi bakholelwa ukuthi ukuthuthukiswa kwengane enempilo esibelethweni, kubalulekile ukulondoloza isimo esivamile esimweni somzimba nesokwengqondo ngesikhathi esisodwa.
Indlela yokuphefumula nokuphumula lapho uzalwa?
Ukubeletha ngaphandle kokubuhlungu akuyona inganekwane, kodwa kuyiqiniso
Indlela yokuqinisa izicubu zesisu ngemuva kokubeletha?
Kungani ingane yami izwa ubuhlungu ngemva kokushisa?
Indlela yokuzilungiselela wena nomzimba wakho ekuzalweni kwengane yakho
Umlando weBrand Max Factor
Izidumi zaseRussia zithumele izithombe zamamama abo ku-Instagram
I-lavash roll ne-saumon
Amabhisikidi eSesame nge ukhilimu omuncu
Amaphutha wesifazane ngamadoda
Kungani udinga ukuxhumana nengane yakho
Indlela yokuthuthukisa ukuzethemba kwengane
"Akusiyo i-borsch ukukupheka": amafilimu ngabesifazane besempi
Ungakwazi yini ukuya ocansini ngesikhathi ukhulelwe?